သားဦးမိခင်တို့ ရှောင်ရှားရမယ့် အမှား(၄)မျိုး - Chit MayMay
Home Lotaya သားဦးမိခင်တို့ ရှောင်ရှားရမယ့် အမှား(၄)မျိုး
သားဦးမိခင်တို့ ရှောင်ရှားရမယ့် အမှား(၄)မျိုး
သားဦးမိခင်တွေက အမှားလုပ်မိမှာ အမြဲတမ်းကြောက်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒါကပုံမှန်ဖြစ်တာကြောင့် မစိုးရိမ်သင့်ပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အများအားဖြင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အမှားလေးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အကြံပေးချက် (၄)မျိုးကို မျှဝေပေးပါမယ်။
မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာခြင်းက မမေ့နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းက ထူးခြားတဲ့ အာရုံခံစားမှုပြည့်ဝတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ သားဦးမိခင်ဖြစ်လျှင် သင့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာ သံသယတွေနဲ့ မေးခွန်းတွေ အများကြီး ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါက မိခင်တစ်ယောက်အဖြစ် သင့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်ဆင်ထားပါစေ အနည်းငယ်သောအရာတွေကို လျစ်လျူရှုမိပါလိမ့်မယ်။ သားဦးမိခင်တွေ သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ မေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့ ကလေးက ဆာလောင်နေလား? သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရေချိုးပေးသင့်လဲ? သူ့ကို မကြာခဏ နို့တိုက်ရမလား? ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ သားဦးမိခင်ဖြစ်လို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဒါက သင်နဲ့ သင့်မိသားစုအတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်း အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေကတဆင့် နားလည်ဖို့ လေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
သားဦးမိခင်တွေ ဘာကို မပြုလုပ်သင့်ဘူးလဲ?
မိခင်လောကမှာ အယူအဆမှားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါက မိခင်အသစ်တွေကို ကလေးနဲ့ မိသားစုရဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ အမှားတွေ လုပ်မိစေနိုင်ပါတယ်။
အမှားအများဆုံးက နို့တိုက်အချိန်ဇယား သက်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမပြုလုပ်ခင် ကလေးနို့တောင်းတဲ့အချိန်မှာ ကလေးကို နို့တိုက်ရမယ်ဆိုတာ သင်သိထားရပါမယ်။ ဒါက ငြီးငွေ့ဖွယ် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းက သင့်ကလေးကို အမြဲတမ်း နို့ဝပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေစေမှာ သေချာပါလိမ့်မယ်။
မွေးကင်းစကလေးတွေဟာ အရမ်းနူးညံ့ပြီး အရာအားလုံးကို sensitive ဖြစ်ကြပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ပိုပြီးမငိုအောင် ကြမ်းတမ်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဆက်ဆံတာ ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ မွေးကင်းစကလေးဟာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် မိခင်အသစ်တစ်ယောက်အဖြစ် ဒါကို အလွန်အကျွံမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သင့်ကလေးကို အနှီးနဲ့ ကျစ်နေအောင် ထုပ်ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါက ကလေးကို မသက်မသာခံစားရစေပြီး ရေဓါတ်ခန်းခြောက်မှုလည်း ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အနှီးပတ်ပေးရင် ကလေးတွေငိုတတ်တာက သူတို့မကြိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကလေးရဲ့လက်လေးတွေ၊ ခြေထောက်လေးတွေက အေးနေတာ သို့မဟုတ် ခရမ်းဖျော့ရောင်သန်းနေရင် သူတို့ အေးနေတာဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ဖုံးလွှမ်းထားပေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကလေးဟာ လည့်ပင်းနဲ့ ခြေထောက်တွေ တစ်ဝိုက်မှာ ချွေးထွက်နေတာတို့ ပူနွေးမှုခံစားနေရတာတို့ သတိပြုမိရင် သူတို့အဝတ်အစားတစ်ချို့ကို ဖယ်ရှားပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
၁။ အခြားသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို နားထောင်ခြင်း
သင်ဟာ သားဦးမိခင်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း လူတိုင်းက ကူညီဖို့ ကြိုစားခြင်းကြမှာပါ။ ဒါက သင့်ရဲ့နံဘေးမှာ သာယာကြည်နူးစရာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဘဝမှာ ဒီအထူးအချိန်လေးအတွင်း သင့်မိသားစုနဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေက တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အဖော်တွေအများကြီးရှိဖို့ တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ လွှမ်းမိုးခံရသလို ခံစားရပေမယ့် ဒါကပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထင်မြင်ချက်တွေအားလုံးကို ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အခြားလူတွေရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်မထွေးပါနဲ့။ သူတို့ထဲက တစ်ချို့က မှန်ပေမယ့် တစ်ချို့ကမမှန်ပါဘူး။ သင်ဟာ အကူအညီလိုတယ်လို့ ခံစားမိလျှင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ဆီသွားပါ။
၂။ သင့်ရဲ့စိတ်ထဲက ယုံကြည်နေတာကို နားမထောင်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ သတိထားမိလာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ မိခင်စိတ်က အလိုလိုဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက သဘာဝကိုက မိခင်စိတ်ရှိကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချင်တစ်ချို့ကို ချဖို့ မကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ပြောနေလျှင် အများစုက မှန်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
၃။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို လျစ်လျူရှုထားခြင်း
သင့်ရဲ့မွေးကင်းစကလေးဟာ သင်နဲ့ သင်လက်တွဲဖော်ရဲ့ အချစ်အသီးအပွင့်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားက စိတ်အားထက်သန်မှုကို ရှင်သန်စေဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကောင်းစွာဆက်ဆံပြီး တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်နားထောင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုအားလုံးကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သင့်အချစ်ရဲ့ ရှင်သန်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။ သင့်အချစ်ရေးကို လေးစားမှု၊ သည်းခံစိတ်နှင့် ရိုးသားမှုအပေါ် အခြေခံပါ။
၄။ ဖခင်အား ပါဝင်ခွင့်မပေးတာ
မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရင် အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် အမေဖြစ်ရတဲ့အတွက် ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှု ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူတွေဆီက အထောက်အပံ့တွေကို ရယူနိုင်သော်လည်း သင့်လက်တွဲဖော်က အခြားသူတွေထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ သူလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ဖခင်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ချင်နေပါလိမ့်မယ်။ ကလေးကို ဘယ်လိုချီရမယ်၊ အနှီးဘယ်လိုလဲရမယ်ဆိုတာ သင်ပေးပါ။ ဒီအမှတ်တရအချိန်လေးတွေက သင်တို့မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေဝေနေပါလိမ့်မယ်။ သူက သင့်ကို ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေကြောင်း သတိရပါ။
Previous articleကလေးတစ်ဦးရဲ့ အပြုအမူတွေကို စိတ်ပညာအရ နားလည်ခြင်း
Next articleဆယ်ကျော်သက်ကလေးငယ်တွေကို လေ့လာမှုအားကောင်းစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ